Izidlo kusuka amaqanda izigwaca ezidumile phakathi emizi owazi indlela ziwusizo. Avame ukusetshenziswa kokudla wezokudla. Futhi omama uthanda amaqanda izigwaca inkukhu lapho izingane ezakha Ukudla. Phela, mancane allergenic. Futhi ukunambitheka siphakeme kunabo bonke abanye amaqanda nezinye izinyoni. Sebenzisa nabo indlela ehlukile: abilisiwe, zifakwe emanzini anosawoti, okuthosiwe, iluhlaza noma okugazingiwe. Ukudla izigwaca amaqanda futhi ngokuvamile bakhonze njengamaphayona eziyisisekelo, futhi wakhonza njengephayona Ungadla. Yini ehlanganisiwe Ukwakheka kwabo? Amavithamini, amino acid, amaprotheni, i-phosphorus, ayibe, ithusi kanye nezinye izingxenye eziningi ewusizo.
Izidlo kusuka amaqanda izigwaca, zokupheka okuzokwenziwa okwethulwa kulesi sihloko kuzovumela iyiphi gourmet nge predilections ukudla ekhethekile, esihlwabusayo ukudla sikwele. Asiqale yokuphuzwayo Iqanda eluhlaza. Uma becikekile ukusebenzisa lo mkhiqizo njengoba injalo iluhlaza, leresiphi kuwusizo kuwe. Thatha amaqanda emihlanu izigwaca, bashaywe mixer, bese ufaka inkomishi yekhofi, ijusi yezithelo, noma iwayini elibomvu nezinyosi noma ushukela ukunambitha. Lokhu isiphuzo inomsoco kakhulu futhi ezifanele ukusetshenziswa nsuku zonke.
amaqanda izigwaca Stuffed kuyoba isidlo ephelele itafula zemikhosi. Ikakhulukazi uma uthanda caviar. Akufanele ukuphika ngokwakho injabulo ukunambitha lokhu dish. Thatha amaqanda 10, 50 amagremu nezibiliboco, amagremu 100 of ushizi, omunye ikhukhamba, imifino, utamatisi emibili iminqumo (pitted ngempela). Amaqanda kumele kubiliswe futhi ehlutshiwe, bese usika nabo isigamu bese ususe izikhupha. Ukuze lokhu wobuciko Culinary kwaba abasimeme ipuleti, uhhafu ngamunye angase kancane usike bedplate. Manje eyayigcwele ngokuphephile Roe yabo. Isidlo, beka tincetu utamatisi (kufanele ibe ncane), khona-ke ushizi ngendlela efanayo (tincetu round kungenziwa ngezibuko), ngemuva kwalokhu - the yamakhukhamba, futhi phezu - amaqanda. Indishi eqeda lihlotshiswe imifino, amaqanda izikhupha neminqumo.
Wale mikhiqizo ezimangalisayo, ungase futhi ukupheka kanye salads. Izidlo amaqanda izigwaca, futhi kulokhu kuyoba okunomsoco futhi uphilile. Ngokuba ukulungiswa omunye wabo ukuthatha testes 12, amagremu 100 of umvimba noma ham, ingilazi uphizi okusemathinini, ukhukhamba, amazambane amabili, teaspoonful iyiphi sauce ashisayo futhi 200 amagremu of ayisikhilimu. Musa ukwenza ngaphandle usawoti, pepper kanye namakhambi. Imfihlo yokwenza lokhu isaladi ilula: kufanele usike zonke ukudla ku cubes ezincane, bese ufaka ukhilimu omuncu. Lapho ngikhonza isidlo kufanele abafafazwe ushizi vukuza kanye namakhambi.
Futhi nangu iresiphi omkhulu ukuthi kuwusizo kuwe, uma beyokwamukela izihambeli. Dish ngamaqanda izigwaca kuleli cala - the meatloaf. Ngakho, udinga ikhilogremu inyama nengulube (yenkomo), isigamu ilitha ubisi, 250 amagremu bezinkwa ezimhlophe, onion esikhulu, isanqante, amaprotheni amabili, clove ezimbili garlic, 4 wezipuni zamafutha (sunflower), kweqembu parsley, yebo, amaqanda izigwaca ( 20 izingcezu). Manje ubeke ukugxusha endishini, enezele futhi ofakwe isinkwa ubisi, washaywa amaqanda qanda, bese befaka isicelo esitsheni efrijini. Bilisa amaqanda izigwaca izaqathe, parsley, garlic kanye no-anyanisi kahle akuqede ukuthi ke Fry kwabo ibhotela. Manje ungakwazi ukwengeza imifino kuya yenkomo, usawoti ke, pepper kanye uhlanganise ne parsley. Lungiselela nge bayobhaka iphepha wokubhaka, nivame. Kuyadingeka ukubeka ukugxusha ngesimo izingodo. Khona-ke athatha ehlutshiwe amaqanda izigwaca ngokulinganayo ucindezela kubo kuwo. Ngaphambi kokuthumela isinkwa kuhhavini, kufanele owagcoba futhi zihambisana ephepheni. Bhaka phakathi nemizuzu engu-40 ngaleso lokushisa 200. Unikezele kuphekeke, kubalulekile ukuba usike iphepha ngemizuzu engaba ngu-15 ngaphambi kokuthi likhiphe kuhhavini. Leresiphi nakanjani singaba usizo kabi empilweni onzima uyinkosikazi ezinhle.
Dish ngamaqanda izigwaca ngokuqinisekile ukulungiselela ekhaya lakho ukuletha hhayi kuphela inzuzo, kodwa futhi umuzwa ojulile wokwaneliseka emsebenzini owenziwa futhi ukunambitheka okuholela.